खोलामामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मेयर चौधरीको छोराको मृत्यु , मेयर चौधरीलाई पुत्रशोक !!
मेयर चौधरीलाई पुत्रशोक ,खोलामामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर छोराको मृत्यु,,,हार्दिक श्राद्धाञ्जली !!
मंसिर ४ :- त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरीलाई आज पुत्रशोक परेको छ । मेयर चौधरीको अन्दाजी २५/२६ वर्षिय छोरा मनोज चौधरीको शनिबार पिकनिक गएको र नजिकैको खोलामा मा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको हो ।
चौदण्डीगढी नगरपालिकाको देवधारमा पिकनिक गएकोमा पिकनिकको क्रममा पौडी खेल्दा डुबेका थिए । डुबेका उनलाई उद्धार गरी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिए पनि अस्पतालले मृत घोषणा गरेको त्रियुगा नगरपालिकाकाका सुचना अधिकृत विश्व जित राई ले बुटवल दैनिकलाई बताउनुभयो । मृतक मनोज भेटेनरी डाक्टर रहेको र निजको मृत्युले अत्यन्तै दुख लागेको समेत राइले बुटवल दैनिकलाई बताए बताउनुभयो।
थप: कपिलवस्तु जिल्ला काे मायादेवी गाउपालिका वडा नं २ भरवलिया मा हिन्दु युवा शक्ति कपिलवस्तु संगठन काे गाउँ कमिटी गठन भएको छ । मायादेवी गाउपमलिका अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा काे अध्यक्षता मा भरवलिया गाउ कमिटी गठन गरिएको हाे ।
जस काे अध्यक्ष कनिक लाल यादव , बरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुव बनिया , काेषाध्यक्ष त्रिलाेकी पासवान , सचिव कनिक राम बढई , सह-सचिव मुन्नु लाल अग्रहरी र प्रवक्ता राम किसुन बढई लगायत १३ सदस्य गाउ समिति गठन गरिएको हाे ।
२०७८ मंसिर ७, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 82 Views